Golaha shacabka oo ansixiyay xisaab xirka miisaaniyaddii 2017-ka. | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Golaha shacabka oo ansixiyay xisaab xirka miisaaniyaddii 2017-ka.
Golaha shacabka oo ansixiyay xisaab xirka miisaaniyaddii 2017-ka.
Kulanka mudanayaasha Golaha shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya oo uu shir guddoominayay guddoomiyaha Golaha shacabka Mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan,waxa ay ugu horreyn Xildhibaanada akhrinta koowaad marsiiyeen Hindise Sharciyeedyada Qareennada Soomaaliyeed iyo nootaayada dadweynaha waxaana Golaha usoo gudbiyay Wasiirka Wasaaradda Cadaaladda Xasan Xuseen Xaaji.
Intaasi Xildhibaanada Golaha Shacabka ayaa ansixiyay xisaab-xirka miisaaniyadda Dowladda ee 2017 waxaana codeynta ka dib natiijada ku dhowaaqay Guddoomiyaha Golaha Shacabka oo kulanka shir guddoominayay.
Xildhibaan Maxamuud Cabdullahi Siraaji oo ah Guddoomiyaha guddiga maaliyadda,miisaaniyadda,qorsheynta iyo la xisaabtanka Hay’adaha Dowladda ee Golaha Shacabka ayaa Xildhibaanadda uga mahad celiyay ansixinta Xisaab xirka Dowladda ee 2017.
Dhinaca kale mudanayaasha Golaha Shacabka ayaa sii amba qaaday dood fadhigan kii ka horeeyay bilaabatay oo aheyd maxdarka Xildhibaanada ama soo xaadirista Xildhibaanada ee fadhiyada Golaha.
Guddoomiye kuxigeenka labaad ee Golaha Shacabka Mudane Mahad Cabdalla Cawad oo kulanka ka hadlay oo mudanayaasha kaga celiyay ka doodista ajendaha muhiimka ayaa sidoo kale sheegay in muhiim ay tahay in la helo hanaan shaqada Golaha lagu dar dar geliyo.
Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaliya Mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo kulanka soo xiray ayaa xildhibaanadda kaga mahad celiyay ka doodista ajendaha la xiriira soo xaadirista Xildhibaanada.
Previous articleCiidanka xoogga dalka oo kaalmo gaarsiiyay dadkii uu saameeyay Wubiga Shabeelle.
Next articleCiidamada sida gaarka ah u carbisan ee DANAB oo sii kordhaya.